AKHRISO: DF Somaliya oo shaacisay qorshe cusub oo lagu soo xulayo Baarlamaanka Jubbaland iyo Doorashada Madaxweynaha 2019-ka! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta AKHRISO: DF Somaliya oo shaacisay qorshe cusub oo lagu soo xulayo Baarlamaanka...
AKHRISO: DF Somaliya oo shaacisay qorshe cusub oo lagu soo xulayo Baarlamaanka Jubbaland iyo Doorashada Madaxweynaha 2019-ka!
Muqdisho (Halqaran.com) – Dawladda Federaalka Soomaaliya ayaa soo saartay qorshaha soo Xulista Xubnaha Baarlamaanka 2aad iyo Doorashada Madaxweynaha ee Jubbaland 2019, iyadoo uu dhawaan Axmed Madoobe sheegay in loo doortay madaxweynaha Jubbaland.
War-Saxaafadeed kas oo baxay Wasaaradda Arimaha Gudaha ee dawladda Soomaaliya ayaa lagu soo bandhigay Arintan.
Warka ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa wuxuu ku soo aadayaa Xili uu Axmed Madoobe isku diyaarinayo Caleemo saar, Islamarkaana ay dawladdu sheegtay inaysan Aqoonsanayn doorashadii lagu doortay Axmed Madoobe.
Haddaba Hoos ka akhriso War-saxaafadeedka Dowladda:
DF Somaliya oo shaacisay qorshe
Doorashada Madaxweynaha 2019-ka!
soo xulista Baarlamaanka Jubbaland